Ukuganukeja eSiberia - Black Lake (Khakassia)
Khakassia amachibi ezidume ngokuphulukisa yabo izakhiwo kanye isimo esingavamile, okuyinto sici kuphela izinhlayiya yokukhanya. I eyinqaba sezwe laseSiberia yanqoba izinhliziyo zabaningi. Lapha ngokuvumelanayo sihlanganise ubuhle, kobukhulu nokuhlukahluka kwezinto zemvelo. Omunye ezikhangayo Khakassia kuyinto echibini Sea, etholakala enyakatho-mpumalanga yezwe eduze endaweni Shirin. Eneminyaka engu-25 amakhilomitha away iyona Sayanogorsk no-30 km yokungcebeleka edume "Lake Shira".
Kanjani igama ichibi?
Igama echibini Black (Khakassia), izithombe, okusesihlokweni esithi, kukhona ubufakazi kule nguqulo, otholakala ngenxa Ukwakheka olukhethekile amanzi phansi. Uma kubhekwa indiza senyoni, expanses yayo emnyama ayikajuli ngalokwenele. Isizathu sisobala ngokwanele. Ngokwengxenye phansi lapha ezinodaka, okunikeza isici umbala omnyama amanzi. Ngokusobala, lokhu kwaba kanye isizathu ukuthi lendawo ambize Black. Esikhathini chibi emfuleni, olubizwa nangokuthi ama-Black, futhi iseduze kuyinto edolobhaneni igama elifanayo.
Kuyinto elinye iqiniso elithakazelisayo: ingxenye eyinhloko phansi embozwe ungqimba ubumba nesihlabathi. Amanzi kuleli chibi hhayi njengoba kucacile njengoba kwamanye amachibi, okuyinto idume Republic of Khakassia. Shirinsky District (Black Lake kuyinto eyingqopha bendawo lapha) is kude Russia ezaziwayo. Nangu eza eziningi abantu, njengoba ukwelashwa ephulukisa udaka zithandwa kakhulu.
Ingabe echibini yasehlanzeni, ngokunembile esinqeni amabanga entabeni. Iziqongo ziphansi, kodwa kwezinye izindawo ifinyelela 250 amamitha ngaphezu kolwandle. Sifinyelela engezansi eziningi ezishisayo amaminerali ehlotshisiwe ngamanzi anosawoti, okuyinto ome Phakathi nehlobo. Ngecala lasentshonalanga kwechibi azikho ezintabeni, kukhona eduze Valley Koybalskoy asemaqeleni. Indawo eseduze naleli enkangala ichibi futhi cishe akukho uhlaza, ngokushesha nje esempumalanga ugcwele ehlathini, lapho birches eziningi ngokwanele oluqinile izihlahla.
Black Lake (Khakassia) ine kobujamo obusaqanda. Ububanzi kwesigubhu mayelana 5 km, kanye nobude side kunaleso 2 km. Leli chibi ayijulile, ukujula thukela kufika ezingeni 5 m. Ngo nenkathi eyomile echibini ayijulile cishe angu-3 m. I ogwini oluseningizimu kuhle waqala ukugcwala. Kusukela eningizimu echibini kuvela emfuleni abamnyama futhi namanje kukhona Chernoozernoe ixhaphozi. Kodwa ingxenye esempumalanga yalesi iholide ephelele, isimo sikuvumela ukungena amanzi ebhishi kufinyeleleke esengeziwe ebhishi ngamaholidi. Le ngxenye kwechibi futhi ikakhulukazi ezisetshenziswa yizivakashi. ukuzilibazisa elikhulu lapha akukhona ukuthola, kodwa lena "gqamisa". Le ndawo ephelele kulabo abafuna ukunamathela ngokuphelele isimo intombi, eshiya idolobha.
Black Lake (Khakassia) e isizini ihlobo efudumele ngokwanele. amaminerali wayo Ukwakheka lihlukile kwezinye namachibi kule ndawo ukuthi ayiqukethe eziningi calcium. Kodwa inani umzamo nosawoti amarekhodi - mayelana 8 amagremu ilitha. Lake amanzi abacebile izakhi trace namaminerali. Izinga yabo kuyehla phakathi isiqongo ukushisa kwehlobo kuphela.
Black Lake uhlukile nasodakeni zayo zokwelapha. Yonke kwesigubhu endaweni has inhlabathi. Maphakathi ichibi befinyelela 3 metres. IL kusuka ophuzi ukukhanya shades mnyama, ocebile amaminerali, i-iodine sulphate nezinye izakhi mkhondo. Udaka zokugeza ukusiza ukuqeda izinkinga zesikhumba, isimo emalungeni wonke umzimba.
Nature e Black Lake uhlukile oseyintombi yayo. Kusukela emhlabeni Echibini akukho ingqalasizinda izivakashi njengabanye namachibi, nesimo sawo uhlanzekile futhi isetshenzwe. Izitshalo zinokuphila okunempilo azungeze ichibi engacebile, kodwa nezilwane wehlukile. Indawo eseduze naleli emanzini atholakala izingwejeje, mink kanye hamsters bukhoma, izimpisi nezimpungushe, partridges. I wezasemoyeni flying Cranes, kestrels nezinye izinyoni.
Black Lake (Khakassia) abanakumjabulisa abalandeli yokudoba. Kukhona ukudoba ezinhle kusukela ogwini futhi ngezikebhe. Ichibi kutholakala izinhlanzi ezihlukahlukene: Lenca, carp segolide, perch futhi trout, Grayling handsome. Lezi Abadobi bayokwazisa azifani kwechibi futhi bachithe isikhathi inzuzo nenjabulo.
Idolobhana Black Lake uhlukile futhi nehuha zonke izivakashi. Abantu abaningi bayaqhubeka ukwesabe kokuthi insimu yalo phytocenter "uPraskovya" ukuthi uphulukisa ngamandla emvelo eSiberia.
izivakashi eziningi ziyangena kulezi zindawo, uphinde ubuye. Iningi lazo bakhangwa Isimo esinokuthula owandile ngesikhathi Black Lake. Izibuyekezo eziningi ezinhle bathi Ukuvakashela le ndawo ekahle kakhulu ukuhlanganisa ihlele ukuthi ezinye izindawo eziseduze.
Black Lake (Khakassia) iseduze ezinye ezikhangayo. Lokhu emihumeni Karst, Pissanaya Intaba ngemigwalo lasendulo emadwaleni, lesikhumbuzo yemvelo "Wishlists" Tuinsky ukwehluleka futhi indlela Shamanic. Yingakho ngamaholide ukuze unesizungu lapha kanye, wonke umuntu angakwazi ukuthola okuthile kuwo wonke umuntu.
Aphumula ngosuku lwayo echibini Black mkhulu kulabo bakhathele yesimanje izivakashi izindawo futhi ufuna ukuba wedwa nemvelo, kude okumatasa. Ngemva kokuvakashela le ndawo, lapho namanje emoyeni umoya Labelaphi laseSiberia lasendulo, singayithuthukisa hhayi kuphela umzimba kodwa futhi umphefumulo.
Cádiz: zokungcebeleka kanye nokubuyekeza
Lisbon ongaphansi komhlaba: isikimu, kuyilapho Station ezithakazelisayo
Yini ukuvakashela izindawo e-South Korea? Incazelo emadolobheni amakhulu ase-South Korea
Colombo Amazambane: incazelo, ukutshalwa, izakhiwo ewusizo
Uyazi ukuthi kungani ama-Olympics kangaka ngokuthi - "-Olympic"?
Ngosuku lokuqala ekuphileni usana - umcimbi abajabule kakhulu ukuphila kukamama
Tattoo "Lokhozi" - uphawu senkululeko kanye isibindi